Azerbaijan: Mpikatroky ny N!DA miatrika famonjàna 6-8 taona · Global Voices teny Malagasy
Samy voaheloka taminà fiampangàna diso avokoa ny tsirairay
Voadika ny 21 Mey 2019 6:41 GMT
Tamin'ity herinandro ity tao Azerbaïdjan, nomelohin'ny tribonaly mitsara ny heloka henjana ao Bakou ny lehilahy 8 – 7 mpikambana avy amin'ny hetsika sivily N!DA ary 1 mpikambana avy amin'ny hetsika Free Youth (tanora afaka) – higadra 6 ka hatramin'ny 8 taona. Fiampangàna diso no nanenjehana azy ireo – fanaovana toetran-jiolahimboto, fitazonana zavamahadomelina sy fitaovampiadiana tsy nahazoana alàlana, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo – saingy ny tena helok'izy ireo marina dia ny niarovany ny demaokrasia sy ny soatoaviny.
Ny Martsa 2013, niha-nahazo vàhana ny hetsika N!DA rehefa nampiasa ny tambajotra sôsialy ny sasantsasany tamin'ireo mpikambana ao anatiny mba hikarakarana fihetsiketsehana iray ho entina manamarika ireo toejavatra feno misitery manodidina ny fahafatesan'ny miaramila iray, Jeyhun Gubadov. Ny antontan-taratasin'ny tafika milaza hoe matin'ny fitsaharan'ny fo i Jeyhun Gubadov, nefa olona salama tsara izy ary tsy nanana tantara taminà resaka olan'ny fo talohan'ny niantsoana azy ho miaramila azy. Navoakan'ireo olona avy amin'ny fianakavian'ilay miaramila ny fomba fijerin-dry zareo ny zava-nitranga, tamin'ny fiahiahiana ny fisian'ny fanaovana tatitra diso. Ho fanehoankevitra tamin'ny nahafaty an'i Jeyhun Gubadov, nisy hetsika am-pilaminana iray nokarakarain'ireo mpikambana avy amin'ilay hetsika tao Bakou hanoherana ny fitomboan'ny isan'ireo miaramila maty taorian'ny fampijaliana nitsapàna azy ireo sy ny herisetra ao anivon'ny tafika. Samy naparitaka an-kerisetra daholo ireny fihetsiketsehana ireny sy ny maro hafa koa. Na ny hetsipanoherana ny fampijaliana fitsapàna ao anatin'ny tafika, na ny mpivarotra mijoro manohitra ny fiakaran'ny hofantrano, na ny hatezeran'ny mponina ao amin'ny tanàna iray ivelan'i Bakou, tsapa ao Azerbaijan ny marika mazavan'ny tsy hafaliana mitombo eny anivon'ny vahoaka.
Ireo tonga hanohana an-dry zareo dia nifamory teo anoloan'ny lapan'ny fitsaràna ary nanomboka nihiakiaka ny hoe « Azadeta » (avotsory ry zareo), teny faneva iray manainga ny filoha sy ireo manampahefana mahefa mba hanafaka ireo mpikatroka 8, nefa koa nisy tenifototra iray malaza nampiasaina mba hanaparitahana ny vaovao momba ny « raharahan'izy valo ». An-kerisetra no nanaparitahan'ny polisy ny vahoaka, nanosika io mpanao hetsipanoherana hiala ny faritry ny tribonaly. Araka ireo tatitra avy ao an-toerana, olona 30 no nosamborina, nasesika tanaty fiarabe ary nentina tany amin'ireo toby samihafan'ny polisy.
Tamin'ny fanambaràna farany nataon'izy ireo tao amin'ny tribonaly, nanambara ireo lehilahy 8 mpikatroka ireo fa na nolavina aza ny fangatahana ny hanafahana azy ireo, nanapaka hevitra ry zareo ny hampiato ny fitokonana tsy hisakafo. Nohazavain'izy ireo nazava tsara ny sata ametrahana azy ireo ho lasibatra politikan'ny eo amin'ny fitondràna am-perinasa, ary noho izany dia avelan'izy ireo heloka ireo mpitsara noho ny fanapahankevitra noraisina, toy izao :
Tohin'io didy io, nanoratra ilay mpanao gazety Khadija Ismayil tao amin'ny pejiny facebook, « notsaraina ho meloka noho ny faharanitantsaina, ny fahaizana, ny fahasahiana ary ny fahamendrehany, » betsaka ireo mitovy hevitra amin'izany. Kanefa, raha ny sasany milaza ampahibemaso an'io ahiahy io, ny hafa kosa manohy miaina eo ambany aloky ny tahotra eto Azerbaïdjan, antsoina ihany koa hoe Tanin'ny Afo.